Afhayeenkii wasaarada arrimaha dibadda Siiriya oo ka goostay dowlada Siiriya | Ilwareed.com Isha wararka iyo warbixinada Somalida oo dhan, iyo dhacdooyinka caalamka
Afhayeenkii wasaarada arrimaha dibadda Siiriya oo ka goostay dowlada Siiriya
Posted By ilwareed on Wednesday, December 5th 2012 14:38 EAT
Warar aan la xaqiijin oo laga helayo dalka Siiriya ayaa sheegaya in Afhayeenkii wasaarada arimaha dibada Siiriya uu ka goostay dowlada Siiriya.
Wararka ayaa sheegaya in Jihad Makdisi afhayeenkii wasaarada arimaha dibada dowlada Siiriya uu ka goostay dowlada madax wayne Bishaar Al Asad isla markaasina uu gaaray magaalada London ee dalka Britain.
kuxigeenka madaxa golaha Qaran ee dalka Siiriya Wael Merza ayaa sheegay in mr Makdissi uu gaaray magalada London ee dalka Britain taasi oo aysan wali kala cadayn inuu ka goostay dowlada iyo in shaqada laga cayriyay.
Telefeshinka Al Manar ee xaruntiisu tahay dalka Lubnaan ayaa isna sheegay in Mr Makdissi shaqada laga cayriyay kadib markii uu sameeyay bayaan aan ka turjumaynin qorshaha wadanka Siiriya.
Mr Jihad Makdisi afhayeenkii wasarada arimaha dibada ee dalka Siiriya ayaan wax qabadkiisa waxii ka danbeeyay Bishii July lagu arkin goobaha shirarka jaraa’id iyo hadalo uu jeediyo intaba.
Wariyayaasha ku sugan dalka Britain ayaa iyagana sheegaya in xitaa arinta goosashada mr Makdissi aysan saraakiisha dowladda Britain xaqiijin, iyadoo mr Makdissi uu inta badan ka hadli jiray shirarka Jaraa’id ee Dimishiq isagoo sidoo kale diirada ku saari jiray shirarkiisa Jaraa’id jawaabta ay dowlada Siiriya ka bixinayso rabshadaha ka dhanka ah madaxwayne Bishaar Al Asad.